Kuwedzera michina yekusona, yakanakisa uye ine zvisingarambiki zvinopihwa
Kuwedzera michina yekusona
Nyika yekusona inokwezva vanhu vakawanda. Izvo zvekukwanisa kuita shanduko kune zvipfeko kana, zvekusvika pakutsanangura magadzirirwo ako chinogara chiri chinhu chinogutsa. Saka, kune vazhinji vanosarudza zuva nezuva kutenga yavo wekutanga kusona muchina. Vamwe vanofanirwa kuenda mberi zvishoma uye nekuda kweizvi, ivo vanozodawo muchina unochinja kune zvavanoda.
Kana iwe uchida kuwana chingave sarudzo yako yakanakisa, saka usapotsa zvese zvatinokuudza nhasi. Kubva kumichina yakachipa uye iri nyore yekusonesa yevanotanga, overlock kana kuti ane hunyanzvi uye maindasitiri.
kusona michina kutanga
Kana uchitsvaga imwe kusona muchina kutanga, pazasi iwe unowana mamodheru mana akanakira vanotanga kana mabasa akapusa:
Muenzaniso Zviratidzo Mutengo
Muimbi Vimbiso 1412
-Mhando dzemisono: 12
-Stitch kureba uye hupamhi: Adjustable
-4-nhanho automatic buttonhole
-Zvimwe maficha: compact dhizaini, yekusimbisa seams, zig-zag 133,24 €
Ona kupiwaOngorora: 9 / 10
Muimbi 2263 Tsika
-Mhando dzemisono: 16
-Stitch kureba nehupamhi: Inogadziriswa kusvika ku4 uye 5 mm zvakateerana
-Automatic buttonhole 4 matanho
-Zvimwe maficha: Yakatwasuka uye zig-zag kusona, accessories, presser tsoka 137,75 €
-Mhando dzemisono: 31
-Stitch kureba uye hupamhi: inochinjika kusvika ku5 mm
-Zvimwe maficha: LED, inogadziriswa tsoka, simbi spool inobata 189,99 €
Ona kupiwaOngorora: 10 / 10
-Mhando dzemisono: 40
-5 otomatiki mabhatani, 1 nhanho
-Zvimwe maficha: Mabasa epatchwork uye quilting 171,31 €
Kunyangwe isiri mutafura iri pamusoro, iwewo haugone kurega iyo Lidl yekucheka muchina, modhi yakanaka yekutanga nayo asi kuwanikwa kwayo kunogumira kuzvitoro zvesupermarket.
Iwe uchave wakarurama nechero ipi yemhando dziri patafura, asi kana iwe uchida kuziva zvishoma nezve imwe neimwe yadzo, pazasi isu tinokuudza iwo makuru maitiro eimwe neimwe yeaya mashini ekusona ayo ave sarudzo yakakwana kune avo vanoda kutanga munyika yekusona kana kune avo vari kutsvaga yakanaka mhando-yemutengo sarudzo:
Muimbi Promise Machine...
Kana uchitsvaga muchina wekusonesa wakakosha une zvinhu zvakakosha kuti utange, iwo Muimbi wekusonesa Vimbiso 1412 ichava yako. Kana ukaronga kuita mabasa ari nyore senge hemming kana zipping, pamwe chete nemabhatani, achakunakira iwe. Mukuwedzera, imhando yemuchina pamutengo wakanaka. Zviri nyore kushandisa uye sezvatinotaura, zvakanaka kana uchangotanga. Kunyangwe iine 12 misono yakasiyana, iwe unofanirwa kuwedzera mafestoni ekushongedza.
Mutengo waro unowanzo kutenderedza 115 euros uye kugona iva wako pano.
Muimbi 2250 Tsika
Muimbi 2250 Tsika -...
Icho chimwe chei michina yekusonesa inotengesa zvakanakisa, saka, isu tatova nedata yakanaka pamberi. Iine mabasa mazhinji pamwe chete akakosha kana uchitanga munyika yekusona. Zvakare, kwete izvo chete, sezvo nehwerengedzo yegumi stitches, ichave zvakare yakakwana kana iwe uchinge watove nekutanga. Saka, iwe hauzove mupfupi. Ndiyo imwe yakareruka, saka unogona kuitakura zvinoenderana nezvaunoda.
Mutengo wemuchina uyu wekusonesa kutanga uri pamusoro 138 euros y unogona kuitenga pano
Imwe yemichina yakakosha ndeyeAlfa Style 40. Kupfuura chero chinhu nekuti iri nyore kwazvo, kune avo vese vasina pfungwa yekusona. Chii chimwe, mabasa ayo akakwana seautomatic threader, buttonhole mumatanho mana. Iyo ine zvakare mwenje we LED, pamwe neblade yekucheka shinda. Rangarira kuti kune 12 stitches pamwe maviri ekushongedza scallops. Chii chichave chakakosha kumabasa akajairika.
Muchiitiko ichi, mutengo unokwira kusvika ku180 euros. Tenga pano.
Hama CS10 Machine...
Kana iwe uchida kuzvikurudzira iwe nekutanga muchina wekusona wemagetsi, iyi ichava muenzaniso wako wakanakisisa. Kwete nekuti ndeyemagetsi inonetsa kushandisa, zvakapesana. Kuwedzera kune akanyanya stitches, unogona zvakare kutanga matanho ako ekutanga munyika ye patchwork pamwe chete ne quilting. Zviri nyore kushandisa sekusarudza basa ratiri kuzoita, kureba nehupamhi hwemwe neumwe musono uye ndizvozvo.
Chinhu chakanaka ndechekuti kana iwe uchiziva maitiro ekushanda neakareruka, zvakare inobvumidza iwe kuti uende mberi zvishoma, nekuda kwekuzara kwayo. Zvose izvi nemutengo wepamusoro 165 euros. Kana uchida, unogona tenga pano.
Kana iwe uchida kuona mamwe mamodheru e hama yekusona michina, pinda iyi link yatichangobva kukusiya.
michina yekusonesa yakachipa
Kana izvo zvauri kutsvaga iri iyo yakachipa sarudzo yezvose, saka unayo michina yekusonesa yakachipa kunyangwe isu takasarudzawo mamwe mamodheru ane kukosha kukuru kwemari:
-Mhando dzemisono: 13
-Stitch kureba uye hupamhi: Haisi kuchinjika
-4 sitiroko grommet
-Zvimwe zvinhu: Kaviri tsono 115,36 €
-Mhando dzemisono: 17
-Stitch kureba nehupamhi: 2 zviyero
-Zvimwe maficha: otomatiki mhepo, mwenje, ruoko rwemahara Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
Muimbi Nyore 3221
-Mhando dzemisono: 21
-Automatic buttonhole 1 nguva
-Zvimwe maficha: mwenje, ruoko rwemahara, otomatiki threader 179,99 €
Ona kupiwaCherechedza: 9/10
Alpha Inotevera 40
-Mhando dzemisono: 25
-Automatic buttonhole 1 nhanho
-Zvimwe maficha: Kupokana, kusununguka kwekusungirira 232,99 €
Takatarisana nemichina yekusonesa yakachipa. Iyo Jata MC695 ine huwandu hwemhando gumi nenhatu dzemastiche. Zvakanyanya muchina uri nyore kushandisa uye wakareruka kana zvasvika pakutakurwa. Iine zvakawanda zvekushandisa, pamwe chete nechiedza chakabatanidzwa. Yakakwana kune avo vanotanga asiwo kune avo vanotoda chimwe chinhu. Zvichida pfungwa yakashata ndeyokuti kureba uye upamhi hwemusono haugadziriswi.
Mutengo wayo haudzivisiki uye unogona kuva wako 113 euros. unomuda here Tenga pano
Muchina Wekusonesa Muimbi...
Ndiyo imwe yezvakanakisa sarudzo. Maonero anobvumirana kuti ndiwo muchina wekusona kutanga nawo, asiwo kune vanhu vanoda chimwe chinhu munguva pfupi. Saka, kana iwe uchigona kuisa mari yakawanda, iyi ndiyo modhi yako. Iyo ine 21 stitches ine kureba uye hupamhi regulator. Chii chimwe, ichapa 750 stitches paminiti, ruoko rwakasununguka uye chiedza chakabatanidzwa.
Muchiitiko ichi, isu tinobheja pamutengo mukuru wemari uye ndiko kuti kunyangwe isiri yakachipa semamodheru maviri apfuura, iyo Singer Nyore inoyevedza yekupinda modhi inogona kuve yako ye158 euros uye kuti iwe unogona. tenga pano.
ALFA Inotevera 40+ Chitubu ...
Imwe yemichina yekusonesa ine hunhu hwepamusoro ndeuyu. Shanduro itsva ye Alpha michina yokusonesa Next. Kune akawanda emhando dzemhando iyi ane maitiro akafanana. Asi munyaya iyi, tasara neAlfa Inotevera 45. Yakanakira avo vachangotanga kana kune avo vanodawo kuti muchina wavo wekutanga wokusonesa ugare kwenguva refu. Ne 25 stitches uye 4 yekushongedza scallopsVanozozadzisa zvaunotarisira.
Iyo Alfa Inotevera 45 imhando ine mutengo dzakatenderedza 225 euros uye chii iwe unogona tenga pano. Kuwanikwa kwavo kushoma saka kana vasina stock kana uchinge wazvitenga, unogona kutenga chero mamodheru avo kubva kuInotevera mhuri sezvo iwo akafanana zvakanyanya maererano nemaitiro.
Toyota SPB15 - Muchina...
Imwe yesarudzo dzakachipa ndeiyi. The Toyota sowing machine SPB15 Ndiyo imwe yesarudzo huru. Iyo compact, yakapfava uye ine 15 mhando dzemisono. Pakati pavo, tinosimbisa 4 yekushongedza mhando, hem stitch pamwe ne zig-zag. Iyo ine zvakare inobatsira chaizvo recoil lever.
Mutengo weToyota SPB15 yekusona muchina ingori 112 euros uye unogona tenga pano.
Kana izvo zvauri kutsvaga chiri nyanzvi yekusona muchina, pazasi tinokupa mamwe emhando dzakakwana kune avo vari kutsvaga mabhenefiti uye nani emhando mabasa:
-Mhando dzemisono: 197
-7 eyelets 1 danho
-Zvimwe maficha: Quilting, Patchwork, 15 tsono nzvimbo 349,99 €
Muimbi Curvy 8770
-Mhando dzemisono: 225
-Zvimwe Zvimiro: Alphabet Pateni, Smart Threading Mutengo hauwanikwi
Ona kupiwaOngorora: 8 / 10
Muimbi Starlet 6699
-Mhando dzemisono: 100
-6 eyelets 1 danho
-Zvimwe maficha: 12 tsono zvinzvimbo, simbi chimiro 279,99 €
Muimbi Quantum Stylist 9960
-Mhando dzemisono: 600
-13 eyelets 1 danho
-Zvimwe zvinhu: 2 mwenje we LED, 26 tsono nzvimbo 749,00 €
-Mhando dzemisono: 60
Zvimwe zvinhu: LCD kuratidza, Kaviri kureba presser tsoka 649,00 €
Kana tichitaura nezvemichina yehunyanzvi yekusona, isu tiri pachena kuti tave kutotaura nezvemashoko makuru. Zvimwe zvinhu zve kupedza mabasa senyanzvi. Muchiitiko ichi, Bernett Sew & Go 8 anotisiya tine huwandu hwe197 stitches. Pakati pavo, makumi mashanu nemasere ekushongedza. Iwe zvakare uchawana huwandu hwegumi neshanu masisitimu etsono uye kaviri kureba kweiyo presser tsoka. Inopikisa zvakanyanya uye ine ruoko rwakasununguka.
Mutengo weiyi nyanzvi yekusona muchina ndeye 399 euros uye unogona tenga pano.
Muimbi Curvy 8770 -...
Pasina kupokana, takatarisana neimwe yesarudzo dzakanakisisa. Pamberi pechiratidzo chatinoziva tese uye chinogara chichitiratidza sarudzo dzakanakisa. Panyaya iyi, zvinosanganiswa nehuwandu hwe225 stitches. Chokwadi tenda kune izvozvo unogona kurega fungidziro yako ichibhururuka. Pamusoro pezvo, ine mapatani, ane inogadziriswa musono kureba uye hupamhi uye ine otomatiki mamhepo system. Tsono mbiri nemhando nomwe dzemabuttonholes… chii chimwe chatingakumbira?
Kana iwe uchifarira, unogona kutenga iyo Singer Curvy pano
Isu takatotanga ne 100 stitches. Saka, tinogona kutowana pfungwa yekuti ndemumwe muchina unozotitendera kufambira mberi pese patinoda. Kureba uye upamhi hwazvo zvinogadziriswa. Mukuwedzera, inofanira kutaurwa kuti ine 12 tsono zvinzvimbo pamwe nemahara ruoko uye LED mwenje. Kwete kunyange micheka yakakora ichaipikisa.
Kunyangwe iri inyanzvi yekusona muchina, iyo Singer Starlet 6699 inogona kuva yako chete 295 euros. Unoida here? tenga pano
Muimbi Quantum Stylist...
Zvechokwadi, kana tikataura pamusoro pemichina yekusona yeunyanzvi, hatigoni kukanganwa Muimbi Quantum Stylist 9960. Pasina mubvunzo, ndeimwe yeayo ayo zvose zvaunazvo mupfungwa zvichaisa mukuita. Iine 600 marudzi e-stitches, zvose urefu hwayo uye hupamhi zvinogona kugadziriswa. Tinogona kutaura kuti ndizvo imwe yeakanyanya simba pamusika.
Mutengo wacho ndewe 699 euros asi mukudzoka tichagamuchira imwe yemichina yekusonesa yakanakisa pamusika uye yaunogona kutenga kubva pano.
Alfa Model 2160-Muchina...
Isu tasara neAlfa muchina modhi ine maitiro akakwana, ine LCD skrini iri nyore kushandisa. Zvichavawo yakakwana kune machira akakora, saka iwe unogona kuita mabasa akasiyana nemhedzisiro yakanaka. Automatic threader, pamwe ne60 stitches uye nomwe marudzi emabhatani.
Mutengo weiyi nyanzvi yekusona muchina i518 euros uye unogona tenga pano.
Nzira yekusarudza muchina wangu wekutanga wekusonesa
Kusarudza muchina wangu wekutanga wekusonesa kungasava basa riri nyore. Tese tinofunga nezvemuchina wakanaka, usingachinji unoita basa nekupedza kwakanaka. Asi pamusoro peizvi, pane zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo.
Kunyangwe ingave imwe yemibvunzo inodzokororwa, yakakosha. Kana iwe uchizoishandisa chete kune akanyanya kukosha mabasa, saka hazvina kukodzera kushandisa mari yakawanda pamuchina wehunyanzvi. Kupfuura chero chinhu nekuti hauzoshandisa hafu yemabasa ayo. Zvino, kana iwe uchida nyika yekusona, usatenge muchina wakanyanya. Chinhu chakanakisa ndechekuti iri pakati nepakati, ine mabasa akati wandei uye inotitendera kufambira mberi zvishoma. Zvikasadaro, munguva pfupi ichave yakati rembera kune zvatinoda.
Uye usazvinetse kana iwe usingazivi maitiro ekuzvibata pakutanga, pano iwe unogona dzidza kusona zviri nyore uye zvakajeka.
Ndezvipi zvimiro zvinofanira kuva nemuchina wangu wekutanga wekusonesa?
misono mhando: Chimwe chezvinhu zvinofanirwa kutariswa ndeye ma stitches. Kune mabasa akakosha, muchina une mashoma uchave wakakwana. Kana zvisina kudaro, sarudza idzo dzine misono yakawanda. Kureba kwekusona kwakakosha kana uchishanda nemachira akakora. Nokudaro, tinenge tichida misono yakareba. Iyo hupamhi hwema stitches yakakoshawo kana iwe uchizoita basa rakadai isa mabhandi elastic kana overcasting.
eyelet: Pane misiyano yakati wandei pakati pavo. Zvechokwadi, kugadzira bhatani mumatanho mana hakuna kufanana nekugadzira imwe. Chimwe chinhu chekuchengeta mupfungwa sezvo neichi ruzivo tinogona kugadzira akasiyana mabhatani pazvipfeko.
tsono nzvimbo: Iyo yakawanda nzvimbo yemuchina wekusona, iyo yakawanda sarudzo yatichava nayo pakusarudza mhando dzakasiyana dzekusona.
muchina brand: Kazhinji, nguva dzose zviri nani kuisa chivimbo chako mumhando dzinozivikanwa zviri nani. Kupfuura chinhu chipi nechipi nokuti tinoziva kuti tiri kubhadhara nokuda kwounhu hwakanaka. Pamusoro pezvo, isu tichava nehunyanzvi sevhisi iri pedyo pamwe nezvikamu zvakasiyana zvatinoda.
Potencia: Ndokumbira utarise kuti michina ine simba isingasviki 75W haina kukodzera kusona machira akakora.
Yeuka kuti muchina wokusona une zvakawanda zvakanakira. Imwe yeiyi huru ndeye kukwanisa kuchengetedza maeuro mashoma pane zvipfeko. Chokwadi unopererwa kana vana varasikirwa nembatya dzaive itsva kana kuti paunoenda kuchitoro woshaya chinhu chinogutsa zvaunoda. Iye zvino unogona kuchinja zvose izvi, nekushivirira zvishoma uye kuzvipira. Zvirokwazvo:
Muzviitiko izvi, usazvirega iwe uchishamiswa neiyo michina yekare yokusonesa sezvo dzakanyanya kuoma kubata uye nhasi dzinoshandiswa zvakanyanya sechinhu chekushongedza kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Kana bhajeti iri dambudziko kwauri, unogona kugara uchitsvaga kutenga masecond hand machines.
Muchina wekusonesa wepamba vs muchina wekusona weindasitiri
Iwe unoziva here chikuru misiyano pakati pemushini wekusonesa wemumba nemuchina wekusona weindasitiriiye? Pasina kupokana, ndeimwe yeruzivo rwaunofanirwa kuziva usati watanga kutenga imwe yeaya maviri. Pano zvakare pane zvinhu zvakawanda zvaunofanira kuziva.
muchina wokusonesa wepamba
Seizvo zita rayo rinoratidza, muchina wekusonesa wepamba ndiwo une mabasa akakosha emabasa anowanikwa zvakanyanya. Pakati pavo tinosimbisa mabasa ekusona atinoziva tese. Rongedza dzimwe mbatya, sonei misodzi, seams kana mazipi.
Muchina wekusona weindasitiri
Dzinoitirwa mabasa anorema zvikuru. Vanovimbisa zvimwe basa rakawanda reunyanzvi uye nemamwe akawanda anopikisa seams. Upholstery kana tambo dzakakwana kune iyi mhando yemuchina. Chimwe chinhu chisingafungidzike kune vamwe vake. Pamusoro peizvi zvese, zvinofanirwa kutaurwa kuti kana tichida muchina werudzi urwu, imhaka yekuti tine basa rakakura zuva nezuva uye nekuti isu tatova nevakawanda kupfuura ruzivo munyika yekusona. Izvo zvakagadzirirwa kushanda nemavhoriyamu makuru emachira uye kwete kungove mufekitori, asiwo kuve pamba.
Vanotipa kumhanya pakati pe1000 ne1500 stitches paminiti, hongu zvakare ine rimwe divi rakashata. Ichapedza simba rakawanda pane yakajairika muchina uye vanogona kuita ruzha kupfuura mamwe.
Kunotenga muchina wekusona
aNhasi tine nzvimbo dzakati wandei dzatinogona kutenga muchina wekusona. Kune rimwe divi, isu tine zvitoro, hypermarkets pamwe nezvitoro kwaunogona kuwanawo zvimwe zvigadzirwa zvemba. Ehezve, mukuwedzera kune izvo, iwe zvakare une mapoinzi epamutemo anomiririra imwe neimwe yemhando yemuchina.
Asi kana iwe usingade kupedza maawa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, kutengesa kwepamhepo ndeimwe yeakanyanya kukosha sarudzo. Mapeji akaita seAmazon Vane marudzi ose emhando., pamwe chete neayo akanyatsotsanangurwa maficha nemitengo inokwikwidza. Muchokwadi, iwe unogona kutochengetedza maeuro mashoma uchienzaniswa nezvitoro zvenyama.
Michina yese yekusonesa inouya nezvakawanda zvekushandisa. Zvechokwadi, izvi zvinogona kuenderana nemhando yemuenzaniso. Kunyangwe zvakadaro, ma spare parts anogara ari imwe yenheyo dzekutenga kwedu. Kana zvasvika pakuzvitenga, chero iwe uchitarisa tsanangudzo yemuchina wako. Ikoko ivo vanokuudza kuti ndeupi rudzi rwemhando yaunoda kana, kana ichitsigira wepasirese.
Next tichaona michina yekusona zvinonyanya kuitika:
Kunyangwe tichifunga kuti ichatibatsira neshinda dzatinadzo, hazvina kumbokwana. Dzimwe nguva, tinoda mamwe mavara, kune mamwe ekutanga sarudzo dzinouya mupfungwa. Yeuka kuti zvakakosha kuva nazvo shinda yepolyester pamwe nekushongedza. Muchitoro chaunotenga muchina, ivo vanozove nawowo kwauri.
Kunyangwe michina mizhinji yatova nazvo, zvakakosha kuti uifunge. Kuvonga kwavari, unogona kuita marudzi akasiyana-siyana e-seams. Iwe haugone kuva usina ivo!
Kana tsoka dzekutsikirira kana shinda dziri dzekutanga, ko nezvetsono? Vamwe vanouya nemuchina wedu, asi yeuka kuti mamwe anogona kurasika munzira. Saka gara uri pedyo tsono dzakawanda. Zvakanakisisa kusarudza tsono dzemicheka yakawanda yakasiyana Uye hwakanaka.
Pamwe chete nemabhobhini, zviri nani kutarisa nyaya. Nenzira iyoyo hapana chaunopotsa. Zviri nani kuva neanenge 12 kana 15. Ramba uchifunga izvozvo!
accessories mu pack
Kana iwe ukaona kuti haudi kuve neizvi zvishongedzo wega, unogona kugara uchitenga iyo inonzi pack. Mariri, iwe unowana iyo inonyanya kukosha mukuwedzera kune mamwe chigero mumamodheru akasiyana kuti aenderane nemabasa edu. Iwe haugone zvakare kupotsa vanocheka uye matepi kuyera.
23 makomendi pa«»
31 Chikunguru 2018 the 6:34 pm
Ndiri kuzeza pakati pehama cs10, mukoma fs40, singer 6699, alfa cooakt 500
31 Chikunguru 2018 the 6:35 pm
Ndeipi ingave yakakwana?
Nyamavhuvhu 1, 2018 pa9: 35 am
Nekukosha kwemari, Muimbi Scarlet 6699 ndiye anokunda. Kana iwe uchida iyo yakazara yakazara, saka iyo Compakt 500E Plus asi mutengo wayo wakakwira zvakanyanya.
Ndira 2, 2019 pa1: 43 pm
Mhoro gore idzva!!
Ndoda kuti mundibatsirewo ndapota ndine mwana musikana ane 8years anoda fashoni nekugadzira hembe kubva ari mudiki chinhu chinobva pakuzvarwa kwake ndiko kuda kwake mazuva mashoma apfuura ndakaona muchina wekusonesa welidl ungangoita 78 euros zvimwe kana mens ini handichayeuke zvakanaka, nyaya ndeyekuti yaive yekupedzisira uye handina kugutsikana kuitenga nekuda kwezvidiki.
Hazvirevi kuti ndinoda kushandisa mari yakawanda, asi zvakanaka, handidi kutenga chimwe chinhu chinozoita kuti zvindiomere kuwana zvishongedzo, nezvimwewo, nokuti tinogara muCanary Islands uye zvinhu zvose zvinoenda zvishoma nezvishoma. Ini ndaiziva Muimbi hupenyu hwangu hwese, kwaigara mumba mangu, uye ndinoda kuve neyakanaka maererano nemhando uye mutengo uye ndakarasika kana ari Muimbi kana mumwe waunorumbidza. Tinoda kuti ishandise kudzidza uye kutigarisa kwechinguva patinenge tichifambira mberi, mungandibatsirewo here uye nekukurudzira zvimwe ndapota.
Ndira 2, 2019 pa2: 56 pm
Kubva pane zvaunondiudza, modhi yandinonyanya kukurudzira ndeye Singer Promise, muchina wakapfava asi wakavimbika wekusonesa uri nyore kushandisa uye unozotendera mwanasikana wako kukudziridza hunyanzvi hwake munyika yekusona.
Sezvo iwe uchiwana ruzivo, iwe unozokwanisa kuita kusvetuka kune akazara mamodheru, asi kutanga, iyi ndiyo yakanyanya kukurudzirwa sarudzo pasina kupokana, uye zvakare iri kutengeswa izvozvi.
Kukadzi 22, 2019 na3: 41 pm
Makadii henyu ndagara ndine mushini wekusonesa.asi ikozvino ndoda kusona zvimwe zvinhu uye yandiinayo haindipindure,ndaona dzakawanda painternet asi handikwanise.ndinoda rubatsiro rwenyu.I am in doubt. nezveMukoma cx 7o, kana Muimbi STARLEYT 6699. .ndatenda zvikuru
Ndeupi wevaviri anosona musono zviri nani?
Kurume 1, 2019 pa 10:04 am
Pamamodheru aunokurudzira, ese ari maviri sarudzo huru, dzinenge nyanzvi. Muchina weSinger wakakwana sezvo uine mamwe mastitches (100 vs. 70).
Kana iri Hama CX70PE, iri modhi yakatarisana nePatchwork uye zvakare ingangoita 50 euros yakachipa kupfuura Muimbi, saka kana ukasangana nezvido zvako nemuenzaniso uyu, ndeimwe sarudzo huru.
Kubvumbi 9, 2019 pa9: 10 am
Ndinotsvagawo mushina wekusonesa unotakurika unokurumidza kubva zvandajaira kusona namudhara mai alfa narefrey uye vandaona kune vamwe vandaishanda navo vanononoka.
Ndinorida zvekusona zvakajairika asiwo yakasimba inokwanisa kusona zvinhu zvakakora senge leatherette. Mari yangu yakatenderedza €200-400. Kune mhando dzakawanda uye maonero akawanda zvekuti handizive pekutangira. Pakati pedzipi dzaunondiraira uchifunga kuti ndiri kutsvaga kumhanya, kusimba, uye kuita zvakasiyana.
Kubvumbi 9, 2019 pa10: 47 am
Kubva pane zvaunotiudza, modhi inogona kuchinjirwa kune zvauri kutsvaga iSinger Heavy Duty 4432. Mushini wakasimba (muviri wayo une simbi ine ndiro yesimbi), inokurumidza (1100 stitches paminiti) uye inoshanda zvakasiyana. ( unokwanisa kusona marudzi ese emachira uye ine marudzi makumi matatu nembiri ematichi).
Chinhu chakanakisa ndechekuti inokodzera zvakakwana mubhajeti yako.
Kubvumbi 16, 2019 pa9: 55 am
Mangwanani akanaka, ndiri kufarira kutenga muchina mutsva wekusonesa, kubva wandinawo, handina simba rekudhonza uye kureba kaviri kwetsoka yekutsikisa. Pamusoro pezvese ndinosona tepi yenaironi yakamisikidzwa nejira redonje, pane imwe nzvimbo yandinofanira kusona zvidimbu zviviri zvenaironi gobvu nedonje. Nemuchina wandava nemuimbi, unoshanda zvakanaka kwandiri, asi handina simba rekudhonza. Ndeupi muchina waunokurudzira?
Kubvumbi 22, 2019 pa11: 20 am
Muchina wako wazvino une simba rakadii? Tarisa uone Imba Inorema Basa kuti uone kana inokodzera zvaunoda.
Kubvumbi 25, 2019 pa1: 44 pm
mhoroi ndine muimbi we serenade wandakatenga second hand zvino ndave kutopindawo pasi pano ndaida chimwe chinhu kunyanya machira akasimba uye kuita zvimwe zvinhu munondipa zano rei ndanga ndakatarisa ma alphas kuti ndakafarira nekugadzira chokwadi, asi ndinoda kuziva zano rako.
Kubvumbi 26, 2019 pa11: 00 am
Pasina kuziva kuti bhajeti yako ndeyei, zvakaoma kukukurudzira iwe sezvo huwandu hwesarudzo hwakakura kwazvo uye chero €150 modhi yatove nani pane yako yazvino muchina. Asi ini ndoda kuziva kana uchida kushandisa €150, €200 kana €400 kuitira kuti ndikupe sarudzo yemhando yepamusoro yemuchina wekusonesa zvichienderana nezvaunoda.
Neruzivo rwamakatipa, chinhu chega chandingafunga nezvacho ndechekukurudzira Muimbi Unorema Duty kusona iwo machira akasimba.
Chivabvu 2, 2019 pa1: 04 pm
Ndinoda kupa musikana wangu muchina wekusona wezuva rake rekuzvarwa. Ave nemakore achitevera zvidzidzo zvekusona, kugadzirwa kwefashoni nezvimwe, asi handina ruzivo rwenyika ino yemichina yekusona. Anoida kuti agadzire zvipfeko zvake uye aturike mazano ake uye zvikeche kuita chimwe chinhu chinobatika. Ndinodawo kuti ive chinhu chezvisikwa, izvo zvisingamiriri zvakanyanya mukushandiswa kwemagetsi. Ndeupi muchina waunokurudzira?
Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu!
Chivabvu 3, 2019 na10: 04 am
Pasina kuziva bhajeti yako, zvakaoma zvikuru kuti tikurudzire muchina wekusona.
Pamwero wezvakatipoteredza, ivo vese vanouya kuzoshandisa huwandu hwakafanana hwechiedza muzviitiko zvakawanda. Chero zvazvingave, iyo yakaderera kwazvo mutengo unocherechedzwa mubhiri remagetsi (hatisi kutaura nezve air conditioner kana ovheni, iyo inodya zvakanyanya).
Kana iwe ukatipa muganho wezvaunoda kushandisa, tinogona kukubatsira zvishoma.
Chivabvu 15, 2019 pa5: 14 pm
Ndinokutendai zvikuru nemhinduro yenyu. Ndakakanganwa zvachose kunyora bhajeti, inoenda pakati pe150 kusvika ku300 euros.
Chivabvu 16, 2019 na9: 55 am
Ndiri kukunyorera iwe maererano nemubvunzo wako wekuti ndeupi muchina wekusona wekutenga.
Sezvo iwe uchida sechipo kune munhu anenge atova neruzivo rwemafashoni uye kusona, zvakanakisisa kubheta pamuenzaniso unopa zvakasiyana-siyana zvekushongedza. Kune izvo, iyo Alfa Pratick 9 ndeimwe yeakanakisa kukwikwidza iwe yaunayowo pakupa. Uye iwe une yakawanda bhajeti kana iwe uchidawo kupa bhuku rekusona, accessories kana kunyange chivharo.
Kana ukatambanudza bhajeti yako zvishoma mberi, une Compakt 500E yemagetsi yekusonesa muchina unopa mamwe madhizaini ekusona uye uri mune imwe ligi kana zvasvika pakushanda nawo.
Chikumi 18, 2019 pa 11:07 am
Makadii, ndirikuda kutenga muchina wekusonesa unoruka marogo kana mavara. Unogona here kundiudza kuti ndeipi modhi inozviita? Shuwiro yakanakisa
Chikumi 18, 2019 pa 11:17 am
Ndiri kukunyorera meseji yawakatisiira pawebhusaiti yemuchina wekusona.
Kubva pane zvawataura, chinhu chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti iwe unotora muchina wekusonesa wePatchwork, ndivo vanopa zvakanyanya sarudzo kana zvasvika pakushongedza alphabets nemifananidzo yakasiyana.
Semuenzaniso, iyo Alfa Zart 01 mukwikwidzi akanaka uye ari kunze-nzira. Unogona kuita zvose nayo.
Gunyana 27, 2019 na11: 49 am
Mangwanani, ndinoda kuti mundipewo maonero enyu pamichina mitatu yandinayo maonero Inoshanda Alpha 9 Elna 240 uye Janome 3622 kana imwe yaunofunga kuti inoshanda zvakanaka kwandiri, ndatenda, ndakamirira mhinduro yako.
Mbudzi 10, 2019 pa10: 24 pm
Ndinoda blog yako, inondibatsira zvakanyanya. Ndiri kutanga kudzidza kucheka, kusona uye kugadzira mapatani nekuti ndinoda kuzvipira kwairi. Ini ndoda kuisa mari mumushini wakanaka unondigarisa uye unobatsira madhirezi kupfuura zvese. Ini handidi kusvetuka pazviri, ndiko kuti, kwete yakanyanya kukosha (kwete iyo inodhura zvakanyanya yandisingazode) ndeipi yaunokurudzira?
Mbudzi 11, 2019 pa8: 41 am
Isu pachedu, isu tinokurudzira iyo Alfa Pratik 9. Iyo yose-yepasi yekusonesa muchina unoshanda zvakanaka kune vese vashandisi vasina ruzivo uye avo vanotova neruzivo rwakakosha kuti ishandise zvakanyanya pane zvese zvingangoitika.
Nyamavhuvhu 2, 2020 pa2: 59 pm
Makadii ndine muimbi 4830c ,asi haichashandi zvakanaka ,ndoupi angave werudzi rumwe chete,uyo ane hunhu hwakadayi kana kuti pamusoro zvishoma parizvino ndatenda
Ndinogamuchira zvakavanzika mazwi *
Chinangwa chedata: Kudzora kweSPAM, manejimendi emashoko.
Kubvumirwa: Kubvumirana kwako
Kukurukurirana kweiyo data: Iyo data haizounzwa kune wechitatu mapato kunze kwekusungirwa kwemutemo.
Kuchengetwa kwedata: Dhatabhesi inobatwa neOccentus Networks (EU)
Kodzero: Unogona kudzikamisa, kudzoreredza uye kudzima ruzivo rwako chero nguva.
Lidl yekucheka muchina
Alpha yekusona michina
Hama dzekusona michina
Michina yekusonesa muimbi
Michina yekusona yeToyota
Prime Day yekusona michina
black friday yekusona michina
cyber monday michina yekusonesa